Shan qaab oo lacag looga sameyn karo YouTube | Saxil News Network
Lahaanshaha sawirkaYOUTUBE/EVAN EDINGER
Markasta oo aad aragto qof YouTube-ka dhaqaale ka helo ma weydiisaa: “imisaad ka heshaad?”
Evan Edinger oo lacag badan ka sameeyo ayaa sheegay “waxaan dadka u sheegaa qiyaas ahaan. Waxay ku filan tahay in aan kirada guriga iska bixiyo, mararka qaarna aan soo qaato cunto wanaagsan. ma xuma taasi”.
Wuxuu go’aansaday in uu sharaxo sida lacagta looga helo muuqaallada la geliyo YouTube.
Tallaabada ugu horeysa ee YouTube-ka aad lacag uga heli karto waxay tahay “xayeysiimaha”, ayuu yiri.
Qeyb wayn ayey ka qaadaneysaa dhadhanka, laakiin inta waqtiga uu socdo oo ah marka YouTube ay ku lug yeelato, faa’iidada way sii yaraaneysaa.
“Ka fikir sida in ay tahay sirta yar ee Online-ka,” ayuu yiri.
“Waad arkeysaa muuqaalka, haddii aad jeceshahay ama haddii aadan ka helinba, laakiin haddii aad jeclaato, aadna doonayso in aad taageerto, waxaad bixineysaa hal dollar muuqaalkiiba, ama hal dollar bishii”.
“Waxaan patreon isticmaaalayay muddo sannad ah, daawadayaasha lacagta bixiyay ayaa arki karaan muuqaalladeyda, xilli hore ayeyna daawadaan. Mararka qaar su’aalo ayey i weydiiyaan. Way fududahay, mana filayo waxkale”, ayuu yiri Evan.
“Ma ahan oo keliya in ay ku faraxsan yihiin xayeysiinta, balse waxay helayaan saami gaaraya 5-20 boqolkiiba,” ayuu yiri Evan.
“Waxaad ka heli kartaa lacag 12 jeer ka badan midda laga helo xayeysiimaha kale ee lagu xirto muqaallada ee loo garanayo AdSense. Taasi waxay kuula muuqataa la yaab, balse waa run”, ayuu yiri Evan.
“Nin aan isla deggannahay wuxuu heshiis $20,000 oo dollar ah ka helay shirkad uu magaceeda u xayeysiiyay,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Wuxuu sheegay in midda ugu wanaagsan ay tahay heshiiska iyaga loogu ogolaanayo in ay wax u sameeyaan. Waxayna sameeyaan muuqaal aysan shirkadaha sameysan karin iyaga la’aantood.